-रत्नप्रसाद अनामणि श्रेष्ठ ,नाला ,काभ्रे
यो सपनाको आकाशमा
कितिञ्जेल बिचारको मदानी घुमाएर बसौ ?
मलाइ एक झोक्का हुरी चाहिएको छ /
हेरेर म कतिन्जेल
यो आँखालाई बिछ्याई राखु ?
मलाइ उघारिएको चेतना चाहिएको छ /
भ्रमको विश्वासमा अड्किएको
यो समाजमा कति रहू ?
मलाइ गौरवशाली यात्रा शुरु गर्नु छ /
थापेर कतिन्जेल बसू ?
म बाँचेको समाज फेर्न
आकाशलाई काँधमा राखेर
नतुहीने आशा लाग्दो क्रान्ति चाहिएको छ /
कति पटक बन्दकी राख्नु ?
त्यसैले आँखामा असन्तोषका चेप्रा हटाउन
मुठ्ठी कसेका कसिलो हातहरुको
शाहासी साथ चाहिएको छ /
म उत्सुकताको गुन्टा बोकेर
यो गरिब बस्तिहरुमा कति चाहार्नु ?
चर्किएको घाउहरुमा लगाउन
बसन्तका मुस्कानहरुको मलमपट्टी चाहिएको छ /
त्यसैले म हार्दिकताका साथ
मेरो सानो परिवारलाइ सोध्न चाहन्छु
के मैले चाहेको संसारमा
हृदयका साथ सहभागी हुने हो ?
बुध, पुस २३, २०७६ मा प्रकाशित